Sida Loo Codsado Amaahda Ganacsiga - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Sida Loo Codsado Amaah Ganacsi
Sida Loo Codsado Amaah Ganacsi
Markaad go'aansato inaad bilowdo ganacsi, waa inaad u diyaargarowdaa inaad maalgeliso maahan kaliya waqtigaaga iyo tamartaada laakiin sidoo kale lacag/raasumaal, maadaama, tan la'aanteed, ganacsigaagu wuxuu kaliya ku ahaan doonaa qorshe madaxaaga. Xaaladaha qaarkood, shakhsiyaadka doonaya inay maalgashadaan dhammaan waxa loo baahan yahay dhaqaale ahaan laakiin aan haysan raasumaal ku filan ayaa laga yaabaa inay xalliyaan inay helaan amaah ganacsi.
WAA MAXAY DEYN GANACSI?
Amaahda ganacsi waxaa loola jeedaa amaah kasta oo ujeeddooyin ganacsi ah. Hadday tahay inaad hesho ganacsi jira, bilaw ganacsi cusub ama kor u qaado meheraddaada hadda, amaah kasta oo aad ku hesho sababo ganacsi Waa deyn ganacsi.
Waxaa laga yaabaa inay xiiso kuu yeelato inaad ogaato inay jiraan amaahyo ganacsi oo kala duwan oo aad ka qaadan karto haddii aad doonayso inaad mid hesho. Hoos ayaa looga hadlay waa lix nooc oo amaah ganacsi oo caan ah oo laga yaabo inaad tixgeliso.
6 NOOCYADA CAN ee Deynta GANACSIGA IYO SIDA LOO CODSADO
1. Amaahda muddada
Amaah muddo ah sida magaceedu tilmaamayo waa nooc amaah ah oo la siiyo qofka si ay xidhiidh ula yeeshaan muddo wakhti ah. Waxaa jira laba nooc oo ah amaahda muddada Ie muddada gaaban ama muddada dheer.
SIFOOYINKA DEYNTA MUDDADA
Aad bay ugu habboon tahay meheradaha doonaya inay ballaariyaan oo waliba leh sumcad wanaagsan iyo ganacsi caafimaad qaba oo aan rabin inay si weyn u sugaan maalgelinta.
Waxaad heli kartaa raasumaal hore si aad u maalgaliso shirkaddaada.
Muddada amaahdaadu guud ahaan waa inta u dhexeysa hal ilaa shan sano. Amaah muddada ganacsiga ah, waxaad heleysaa qaddar lacageed oo horay loo cayimay iyo dulsaar go'an oo dib loo bixiyo sanado go'an oo ku xiran arrimo kala duwan.
Waxaa inta badan loo adeegsadaa iibsashada qalabka ama dayactirka yar iyo dayactirka maadaama guud ahaan ay u dhexeyso $ 25,000 illaa $ 500,000, oo leh dulsaar 7% ilaa 30%.
Shuruudaha Da'da: Da'da ugu yar ee codsaduhu waa inay ahaataa 18 sano waqtiga codsiga amaahda ugu badnaanna waa inay ahaataa 65 sano wakhtiga qaan -gaadhka amaahda.
TALAABOOYINKA LOO CODSADO DEYNTA MUDDADA
Amaahda muddada waxaa inta badan laga helaa bangiyada ama hay'adaha maaliyadeed sidaa darteed waxaad ka heli kartaa macluumaadka habboon bangiyada ama hay'adaha aad jeclaan lahayd inaad ka dalbato.
Ikhtiyaarka labaad ayaa ah inaad booqato shabakadaha amaahda ganacsiga sida lendio.com iwm oo aad dib u eegto oo isbarbar dhigto xulashooyinka la heli karo ama macluumaadka ku saabsan heshiisyada amaahda ee ay bixiyaan bangiyada iyo NBFCs.
Haddii codsaduhu helo deyn fulinaysa dhammaan shuruudihii ganacsi, isaga/iyada ayaa soo gudbin kara faahfaahinta lagama maarmaanka u ah hababka amaahda ee dheeraadka ah oo ay qaban doonaan bangiyada ama hay'adaha maaliyadeed.
Tallaabooyin dheeraad ah ayaa markaa la soo sheegi doonaa.
2. Amaahda SBA
Macne kale oo lagu helo deyn ganacsi waa iyada oo loo marayo amaahda SBA. SBA si toos ah lacag kuuguma deymiso ee waxay taakulaysaa oo taageertaa ururka ku siinaya deynta.
SBA waxay dejisaa habab amaahyo ay sameeyeen amaah-bixiyeyaashiisa iyo hay'adaha amaahda yar waxayna sidoo kale siisaa dammaanad-qaadyo iyo heerar badbaado deyn-bixiyayaasha gaar ahaan bangiyada kuwaas oo, iyagana, amaahi kara lacag si ay u maalgeliyaan iibsashada.
SBA si toos ah lacag uma siiso milkiilayaasha meheradaha.
Caadiyan, ganacsiyadu waa inay buuxiyaan heerarka cabbirka SBA, inay awoodaan inay dib u bixiyaan, oo ay yeeshaan ujeeddo ganacsi oo sugan. Xitaa kuwa leh sumcad xun ayaa u qalmi kara maalgelinta bilowga.
Deyn -bixiyuhu wuxuu ku siin doonaa liis buuxa oo ah shuruudaha u -qalmitaanka deyntaada.
Amaahda SBA waxaa loo isticmaali karaa in lagu iibsado hanti go'an tusaale ahaan qalab, bixinta deynta jirta, maalgelinta helitaanka ganacsiga, iwm.
U -qalmitaanka amaahda SBA waxay ku xiran tahay ilaha dakhli ee ganacsigu waxay ku xiran tahay tayada iyo taariikhda lahaanshaheeda, iyo aagga meheraddu ka shaqayso.
Shuruudahoodu inta badan uma adka sida kuwa kale ee amaahda ganacsiga.
TALAABOOYINKA LOO CODSADO DEYNTA SBA
Mid kasta oo ka mid ah barnaamijyada SBA wuxuu leeyahay shuruudo u -qalmitaan oo gaar ah iyo habka codsiga. Booqo mareegaha SBA tusaale ahaan www.sba.gov si aad u hesho macluumaad ku saabsan sida loo codsado amaahda SBA iyo tusmooyin si loo hubiyo inaad haysato wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u hesho codsi amaah oo guulaysan.
Bogga internetka, waxaad kaloo ka heli kartaa liis gobol-gobol.
3. KHADKA GANACSIGA EE QIIMAYNTA
Deyntan ganacsi waa fursad weyn oo ganacsiyada yaryar u koraan. Waa amaah wareegsan oo fursad kuu siinaya qaddar go'an oo raasumaal ah, oo la heli karo marka loo baahdo si loo daboolo baahiyaha ganacsi ee muddada-gaaban.
Waxaa jira laba darajo oo ah khad ganacsi oo deyn ah oo ah tusaale ganacsi oo sugan iyo mid aan la hubin.
Khadka ganacsiga ee amaahda amaahdu waxay bixisaa barkin jilicsan marka ay jiraan xaaladaha degdegga ah ee maaliyadeed.
Waa ikhtiyaar maaliyadeed oo dabacsan.
Khadka amaahda ganacsi ee la hubo wuxuu u baahan yahay dammaanad taas oo khadka amaahda ee aan la hubin uusan u baahnayn dammaanad.
Ugu yaraan, waxaad u baahan doontaa ugu yaraan lix bilood oo ganacsi ah iyo $ 25,000 dakhli sannadeedka si aad ugu qalanto khad ganacsi oo deyn ah.
TALAABOOYINKA LOO CODSADO KHADKA GANACSI EE DEYNTA BIXINTA
Khadka ganacsiga ee amaahda waxaa laga heli karaa bangiga ama amaahiyaha internetka. Sida waddooyinka kale ee la xiriira bangiga, dakhli xoog leh, taariikh wanaagsan (inta u dhaxaysa hal sano ama ka badan) iyo sidoo kale dhowr dukumiinti ayaa go'aamiya muhiim u ah fursadahaaga inaad ku hesho khad ganacsi oo amaah deyn ah.
Qaar ka mid ah dukumentiyada la codsanayo waa canshuur celinta shaqsiyeed iyo ganacsi, macluumaadka koontada bangiga, iyo bayaannada maaliyadeed ee ganacsiga, sida bayaannada faa'iidada iyo khasaaraha iyo xaashida dheelitirka.
Deyn -bixiyeyaasha intarneedka guud ahaan waxay leeyihiin xannibaadyo iyo shahaadooyin ka yar kan bangiyada, laakiin waxay u muuqdaan inay ku dallacaan dulsaar sarreeya oo ay leeyihiin xaddidyo deyn oo hooseeya.
4. MAALIYADDA QALABKA
Habkan maaliyadeed wuxuu ku lug leeyahay helitaanka maaliyad/deyn si qalab loogu helo meherad. Dhinac wanaagsan oo ka mid ah nidaamkan amaahda ayaa ah in qalabka laftiisu uu u dhaqmo sidii dammiin, sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn inaad deynta ku sugto wax kale.
Si kastaba ha ahaatee, ogow in maalgelinta qalabka ay kaliya ka shaqeyso kiisaska aad u baahan tahay deyn si aad u daboosho kharashaadka la xiriira iibsashada qalab ama qalab cusub milkiilaha jira.
Deyntaani ma daboosho iibsashada meherad cusub.
Waxaa jira laba ikhtiyaar oo xusid u leh maalgelinta qalabka, tusaale ahaan helidda deyn lagu iibsado qalab ama qalab ijaarasho. Haddii aad dareensan tahay in qiimaha qalabku uu noqon doono mid aad qaali u ah in dib loo bixiyo, waxaad beddeli kartaa aaladda.
Shuruuduhu way kala duwan yihiin iyadoo ku xiran nooca amaah -bixiyeha iyo nooca qalabka, hase yeeshe, amaah -bixiyeyaasha badankood waxay amaah siiyaan meheradaha ugu yaraan 1 sano oo leh illaa $ 50,000 ama ka badan dakhli sannadeedka, oo leh dhibco deyn oo ah 650 ama ka sareeya.
TALAABOOYINKA LOO CODSADO DEYN MAALAYNTA QALABKA
Waxaa jira dhawr fursadood oo onlayn ah oo loogu talagalay qof kasta oo raadinaya ikhtiyaarrada maalgelinta qalabka ama noocyada kale ee deymaha. Tusaalooyinka qaarkood waa Lendio, SmartBiz, Bank of America, iwm.
Waxaad marin u leedahay liis aan kala go 'lahayn ee xulashooyinka ku yaal boggan, tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ayaa sidoo kale la sharraxay.
5. Amaahda bangiga
Hab kale oo weyn oo lagu helo amaah ganacsi waa bangiga. Bangiyadu waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu horreeya ee dadku tixgeliyaan marka ay ka fikirayaan halka ay ka helayaan maalgelin ay ku bilaabaan ama ku horumariyaan ganacsigooda.
Bangiyadu waxay leeyihiin barnaamijyo amaah ganacsi oo gaar ah oo u oggolaanaya milkiilayaasha ganacsiga ama milkiilayaasha meheradda mustaqbalka inay helaan amaahda, si kastaba ha ahaatee, habka helitaanka amaahda bangigu waa mid daal badan waxayna ku lug leedahay bangiga inuu hubiyo qorshooyinkaaga, dhibcaha dhibcahaaga, iyo xaaladda guud ee shirkaddaada.
Waxay u baahan yihiin dammaanad.
Qorshaha dib -u -bixinta wuxuu ku xiran yahay nooca amaahda, daacadnimada macaamiisha, iyo ujeeddada.
Bangigu wuxuu deynta ku bixiyaa koontada deyn -qaadaha. Haddii deyn -bixiyuhu uusan lahayn koonto, isaga/iyada ayaa laga codsan doonaa inuu furo mid ama deynta laga yaabo inaan xitaa la siinin haba yaraatee. intii amaahdii la dalbaday.
6. Kaararka amaahda ganacsiga
Amaahda noocan ahi waxay u baahan tahay waraaqaha ugu yar waana mid u fudud saaxiibtinimada. Waxaad ku amaahan doontaa lacag kaarkaaga deynta si hadhow laguu bixiyo.
Waxaad ku heli kartaa qaddar dhan $ 500,000 oo leh kaarka amaahda ganacsiga, oo dulsaarku ka yahay 8-24%.
Lacagta laga helo kaarka deynta waxaa loo isticmaali karaa wax kasta ama ganacsi kasta.
Waxaad si dhaqso ah u heli kartaa lacagta.
Waxaa laga yaabaa in lagaa rabo inaad siiso ganacsi iyo macluumaad shaqsiyeed markaad codsaneyso
TALAABOOYINKA LOO CODSADO KAARKA GANACSIGA.
Shuruudaha ugu horreeya ee u -qalmitaanka kaarka amaahda ganacsiga waa in la hubiyo inaad mar horeba ganacsi ku jirtay markaad codsanayso iyo sidoo kale hubinta in ganacsigaagu sharci ahaan la oggolaaday.
Tallaabada xigta waa inaad doorato shirkadda aad kaarkaaga amaahda ka qaadan lahayd.
Waxaa jira dhowr ikhtiyaar oo ah meesha aad ka heli karto kaarkaaga deynta, qaar ka mid ah waa xawaashka Mareykanka, bangiga ceyrsashada, kaararka ogaanshaha, Citibank, ceelasha fargo, iwm.
Tallaabada xigta ee la qaadayo ka dib marka aad doorato iibiyaha kaarka deynta ee aad doorbidayso waxay noqon doontaa inaad buuxiso codsigooda kaarka amaahda ganacsiga (iska hubso inay waxyar fududahay).
Waxaad u baahan doontaa inaad bixiso macluumaadka asaasiga ah ee shakhsiga iyo ganacsiga.
15 ARJIGA DEYNTA ONLINE -KA/ SHAQAHA LAYLSIINTA
Ma jiro amar gaar ah, kuwani waa 15 ka mid ah websaydhada amaahda arjiga ee ugu fiican
1. LENDIO lendio.com
2. CAASIMADA GANACSIGA QARANKA Nationalbusinesscapital.com
3. FUNDERA BY WERER NERD nerd wallet.com
4. XEERKA DHAQAALINTA Maalgelinta wareegga.com
6. ONDECK Ondeck.com
7. AMERICAN EXPRESS Americanexpress.com
8. FUNDBOX Fundbox.com
9. GEEDKA BIXINTA LendingTree.com
10. GOKAPITAL GoKapital.com
12. BOEFLY Boefly.com
13. KIVA Kiva.com
14. KABBAGE Kabbage.com
15. DHISMAYAASHA Deynta Loanbuilder.com
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan amaahda GANACSIGA
MA BIXIN KARAA DEYNKEYGII HORE
Sida caadiga ah, qorshaha dib -u -bixinta deyn kasta waxay ku xiran tahay amaahiyaha, xaddiga la amaahday, iyo arrimo kale oo kala duwan. Markaad deyn hesho, sidaad u bixin lahayd ayaa laguu sharxi doonaa, hase yeeshee, waxaa suurtogal ah inaad deyntaada bixiso goor hore ama markiiba. Deyn -bixiyeyaasha qaarkood waxay kuu oggolaanayaan inaad dib -u -bixinnada dib u bixiso adigoon ku soo oogin ganaax lacag -bixin ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in maanka lagu hayo in laga yaabo inay jiraan kharashyo dheeraad ah haddii aad go'aansato inaad dib u bixiso, ama xitaa aad mar wada bixiso.
WAA MAXAY QIIMAHA UGU SAREEYA EE AAN AMAANSAN KARO?
Amaahiyayaashu waxay leeyihiin xadka amaahda ugu yar iyo kan ugu sarreeya. Si kastaba ha noqotee, deyn -bixiyayaasha badankood waxay bixiyaan ilaa $ 5 milyan.
Si loo go'aamiyo deynta kugu habboon, si taxaddar leh uga fiirso waxa ganacsigaagu u baahan yahay deynta, shuruudaha dib -u -bixinta ee aad maamuli karto, iyo inta lacag ah ee aad u baahan tahay.
Kuwa soo socdaa waa lix deyn oo caan ah oo ka mid ah dhowr kale oo laga yaabo inaad rabto inaad gasho.
3. Khadka ganacsiga ee amaahda
4. Maalgelinta qalabka.
5. Amaahda bangiga.
6. Kaarka amaahda ganacsiga
Ogsoonow in nooc kasta oo amaah ah uu la yimaado go'an u gaar ah oo ah shuruudaha iyo shuruudaha iyo sidoo kale qorshayaasha dib -u -bixinta. U hubso inaad si sax ah u raacdo si aad uga fogaato arrimaha.
15ka Sare Ee Malaha Amaahda Shakhsiyeed Ee Loo Yaqaano Amaahda 2022
Iyadoo inta badan deyn bixiyayaasha ay jiidayaan warbixintaada deynta ka hor inta aysan go'aansanin inay ku oggolaadaan deyn, qaar...